रेखा थापा भन्छिन्ः मेरो शरीर भद्दा भयो त के भयो ? – Sidha Post 24
नेपाली सर्वाधिक चर्चित नायिका हुन् रेखा थापा । राम्रो जिउडाल, बेहद चर्चा, घर, कार, बैंक ब्यालेन्स… विलासी जीवनशैली। काम, नाम र दामले मा’लामा’ल करिअरमा सफल भएकी नायिकाकाे रुपमा परिचित रहेकि छिन् । ‘नम्बर वान’ को दौडमा झन्डै सबैलाई उछिनिसकेकी बलिउड अभिनेत्री दिपिका पादुकोणसँग के थिएन? एक वर्षअघि फिल्म ‘ह्या’पी न्यु इयर’ को क्लाइमेक्स सुटिङ हुँदै गर्दा दिपिकाको सफलताले सगरमाथा चुम्दै थियो।
तर, दुनियाँका आँखामा अति सफल, व्यस्त र नि’ष्फिक्री यी सुन्दरी भित्रभित्रै जल्दै थिइन् र आफैंसँग पराजित अनुभूति साच्दै थिइन्। उनलाई किन यस्तो भइरहेको छ, बाहिरी दुनियाँले मात्र होइन, स्वयंलाई समेत कुनै भेउ थिएन।
साँच्चै दुखद थियो त्यतिबेला उनको अवस्था।’ तिनी रेखालाई आफ्नै ठानेर केही सुनाउन खोजिरहेकी थिइन्, तर ओठबाट श’ब्द ख’स्न सकिरहेका थिएनन्।
हिरोइनहरु रुपमा पी’डित छन् भन्ने गौरीले पनि सुनेकी हुन्। कोही पी’डि’त छन् भने त्यसलाई नसहन उनी सुझाउँछिन्। ‘आफ्नो इच्छा पूरा गर्न ग’लत बाटो हिँडियो भने त्यसमै पछु’तो भएर त’ना’व ज’न्मिन्छ। साधारण जीवन र सही मा’र्गले स’न्तु’ष्टि दिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पुरानाले गरेको गल्ती नयाँले दो’हो’र्यासउनु हुँदैन। आफूअनुकूल वातावरण आफैंले सिर्जना गर्ने हो।’ स्राेतः नागरिकन्यूज डट कम